चट्याङले बाँकेको छुट्टाछुट्टै स्थानमा आगलागी – Sadarline
नेपालगञ्ज (डेस्क) : बुधवार बिहान आएको हावाहुरी र चट्याङ्गले बाँकेका छुट्टाछुट्टै स्थानमा आगलागी भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलका अनुसार डुडुवा गाउपालिका–१ छोटी चौफेरीमा हावाहुरीसंगै परेको चट्टयाङ्गका कारण आगलागी हुँदा ३९ घरधुरी जलेर नष्ट हुनुका साथै एकजना स्थानीयबासी र एक चौपाया जलेर घाइते भएका छन् ।
घटनामा घाइते भएकी १५ वर्षीया नन्की यादवलाई उपचारका लागि सीमावर्ती भारतीय बजार लगिएको डुडुवा गाउपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले जानकारी दिए । चट्टयाङ्गपछि स्थानीय रामखेलावन यादवको घरबाट आगो शुरु भएको थियो । आगलागीका कारण लत्ताकपडा, अन्नपात सबै जलेर नष्ट भएको छ ।
यसैगरी सोही समयमा बाँके खजुरा गाउपालिका वडा नं. ६ सिमलघारीमा स्थानीय गोरख विकको घरमा आगलागी हुँदा अन्नपात लत्ताकपडा जलेर नष्ट भएको छ । स्थानीय, प्रहरी र नेपालगञ्ज उप–महानगरको दमकलको सहयोगले आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सदरलाइनडटकम, नेपालगञ्ज : मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले मुस्स्लिम समुदायले शिक्षामा जोड दिन आवश्यक रहेको औल्याएका छन् । समुदायमा रहेको अशिक्षाको कारण पछाडि परेको कुरा उल्लेख गर्दै उनले राज्यको हरेक तहमा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्वको आयोगले पहल सुरु गरेको बताए । उनले बुधबार नेपालगन्जमा मुस्लिम आयोगले आयोजना गरेको पाँच नं. […]